IHydroponics, ukutshalwa kwezimali ngaphandle komhlaba - Hidroponia Asociación Hidroponica Mexicana
IHydroponics, ukutshalwa kwezimali ngaphandle komhlaba
Ama-Hydroponics, isiko lamanzi.
Kusuka ekutholakaleni kokuqala ukuthi lesi sitshalo sikhipha izakhi zayo ezincibilikisiwe emanzini, noma iyiphi inqubo etholakala kule nto ifakiwe encazelweni ye-hydroponics (aeroponics, uhlelo olusha lokutshala, izimpande ezintantayo, izitshalo ezingaphansi komhlaba, njll.). Kuliqiniso, leli khompiyutha lingaphikiswa kalula, ngoba, kunjalo, futhi ngenxa yendlela isitshalo esidla ngalo ekutshaleni kwendabuko kwenhlabathi noma izithelo bukhoma, umehluko oyisisekelo ukulawula kokudla kwezitshalo, ngoba Noma yisiphi isivuno esisekelwa enhlabathini, ukulawulwa kokudla okunempilo cishe akunakwenzeka.
Ngakho-ke, enye yezinto eziyisisekelo ze-hydroponics yikhono lokulawula, futhi ngokusho kocwaningo, akuyona kuphela ukulawulwa kwesondlo kwesitshalo, kodwa futhi nokulawulwa kokuhlukahluka njengokukhanya, ukunqwabelana, izinga le-CO2 , umswakama ohlobene futhi kungenzeka uphenye ngemiphumela yokushisa ezimpandeni zesitshalo, izinkinga zibonakala. kalula kusuka kwezinye izindlela zokulima.
IHydroponics yindlela yokukhulisa izitshalo ngezisombululo zamaminerali esikhundleni somhlabathi wezolimo. Kepha eqinisweni, empeleni, enye indlela eguqukayo kunoma yisiphi isikhala, noma ukutshala imali, ingenziwa ekhaya noma ngezinga elikhulu, kuyindlela enamandla yokukhiqiza indawo encane yemifino ngaphandle kokungcola, yenani eliphakeme lokudla okunempilo, futhi nangokomnotho futhi indlela yokukhiqiza imikhiqizo yemvelo neqhubekayo.
Sikumema ukuthi uhlole isayithi lethu.
Qaphela: amavidiyo atholakala ku: www.hidroponia.org.mx Spanish Spanish kuphela.